Achịcha anọ na-enweghị akwa zuru oke maka ụmụaka | Akwa desser | Ntụziaka
Susana godoy | | Ihe ọerụ Dụ maka ụmụaka, Eggless Ezi ntụziaka
Na-achọ Ezi ntụziaka maka ogbo achicha na-enweghị akwa? Fewbọchị ole na ole gara aga anyị nyere gị ụmụntakịrị aghụghọ iji dochie akwa ahụ na ntụziaka dị iche iche, na taa anyị nwere ntinye pụrụ iche maka ndị nne ahụ niile nọchiri anya àkwá na achịcha ahụ karịa ha isi ọwụwa.
Ma ọ bụ na ụmụaka nfụkasị ma ọ bụ na ọ bụghị, ga-eri ihe niile, ọ bụ ya mere anyị ga-eji chee echiche dị iche iche ohere iji mee ka ha rie ezigbo nri ma n’enweghị ihe nfụkasị ọ bụla. Taa, anyị ejikerela oke ịhụnanya kwadebe, achịcha atọ na-enweghị akwa na-atọ ụtọ, na-enweghị àkwá ka ụmụaka nfụkasị nwee ike ịnụ ụtọ ha n'enweghị nsogbu ọ bụla.
1 Lemon-flavored egg-enweghị yogọt achicha
2 Nnukwu Achịcha Eggless nke Nnukwu
3 Vanilla-esi ísì ụtọ chocolate egg-free ogbo achicha
4 Oroma ogbo achicha na-enweghị akwa
Lemon-flavored egg-enweghị yogọt achicha
Iji kwadebe ya, ị ga-achọ akpa yogọt iji tụọ nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ:
1 lemon yogọt na-atọ ụtọ
4 ntụ ọka
1 sachet nke yist
2 ihe shuga
1 nke mmanụ oliv
1 mmiri ara ehi
Ezigbo nke ọkara lemon
Gwakọta ihe niile eji eme ihe ruo mgbe mgwakota agwa ahụ dị otu. Tinye oven ka ọ dị ọkụ, ma tinye achicha ahụ na efere mmiri ihe dị ka nkeji iri ise. Ọ bụrụ na ị tinye lemon zest, ị tinyere ihe abụọ nke yogọt nesquick, ọ bụghị colacao n'ihi na o nwere soy lecticin, ị ga-enwe nnukwu keki chọkọleti.
Nnukwu Achịcha Eggless nke Nnukwu
Ọ bụ achicha a na-ahụkarị na ndụ, nke nne nne anyị meere anyị, ma na-enweghị akwa. Iji kwadebe ya ị chọrọ:
240 gr nke harina
nta nke nnu
200 gr nke margarine nke na-enweghị lecithin na-abụghị soy
150 gr nke shuga
Ezigbo nke 1 lemon
65 ml nke leche
Gwakọta ihe niile, tinye ha na efere nri. Na-etinye oven ka preheat ruo 180 degrees ma tinye achicha ahụ maka ihe dị ka nkeji 60. Mgbe ahụ jiri obere icing shuga chọọ ya mma.
Vanilla-esi ísì ụtọ chocolate egg-free ogbo achicha
Typedị achicha a zuru oke maka achicha ụbọchị ọmụmụ, ebe o nwere ekpomeekpo pụrụ iche nke ụmụntakịrị nọ n'ụlọ hụrụ n'anya. Iji kwadebe ya ị chọrọ:
220 gr nke harina
50 gr nke nesquick
Obere ala pawuda
200 gr nke shuga
50 ml nke mmanụ oliv
20 ml nke vanilla kachasi mkpa
200 ml mmiri
Kpochapu oven ma dozie achicha achicha n'ime efere mmiri, ma hapụ ya ka ọ ghee na 180 maka ihe dị ka nkeji 50.
Nke a bụ usoro nri ọzọ:
Oroma ogbo achicha na-enweghị akwa
N'ihi na ekpomeekpo oroma, yana isi ya na achịcha, ga-ahapụ anyị a na ahụ ike na kasị mfe nri. Ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị a oroma ogbo achicha na-enweghị akwa. Ihe dị iche iche na nke ọhụrụ dị ọhụrụ maka ezinụlọ dum iji nwee ọ .ụ.
Akara 100 shuga
250 ml nke ihe ọ juiceụ orangeụ oroma ọhụrụ na-enweghị nsogbu
150 gr nke harina
Mmanụ 35 ml
Nke mbụ, anyị na-eme ka oven sie ọkụ ruo 180º. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-akwadebe ihe ụtọ anyị na-atọ ụtọ. Anyị na-amalite site na ịgwakọta shuga na ihe ọ orangeụ orangeụ oroma, nke na-agaghị emebi. Mgbe anyị nwere ya, ọ bụ oge iji tinye mmanụ. Anyị ga-aga n'ihu na-akụ nke ọma ka ihe niile wee jikọta nke ọma. Ugbu a yọchaa ntụ ọka na yist, iji tinye ya na ngwakọta anyị. Anyị na-agwakọta ihe niile nke ọma na naanị anyị ga-ebufe ya na ebu ahọrọ. N’ezie, cheta na ị ghaghi igbasa ya obere butter ma fesa ntụ ọka n’elu ya.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike iwepụ ya na enweghị nsogbu ọ bụla. Yabụ, anyị ga-ahapụ nke anyị oroma achicha na-enweghị akwa mere ihe dị ka nkeji 35. Ka o sina dị, ọ bara uru ịmịpụ ya na ezé ezé iji hụ na, ọ bụrụ na ọ pụta na akọrọ, ọ ga-adị njikere. Ozugbo anyị si na oven pụọ, anyị ahapụ ka ọ dị jụụ ma anyị nwere ike icho ya mma masịrị anyị. Jiri shuga icing, jiri obere syrup chocolate ma obu caramel. Ọ dịzịrị gị!.
Ugbu a, ị ga-anụrịrị ụtọ ha. Jiri ohere! You maara karịa desserts na-enweghị akwa maka ụmụntakịrị? Gwa anyị ihe nchịkọta kachasị amasị gị.
Na Recetin: Akwa akwa, olee otu m ga-esi dochie akwa na usoro nri m?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Ihe ọerụ Dụ maka ụmụaka » Achịcha bekee
Na-akpali nnọọ mmasị, daalụ
daalụ na ọ rụrụ ọrụ maka m
Achicha chọkọleti m hụrụ n’anya, ọ dị mma, daalụ
Gini bu envelopu nke ihe eji eme yist bu? M na-azụta ya na kilo ọ bụghị envelopu ... daalụ!
adelso sanchez dijo
Nzaghachi nye adelso sanchez
1 sachet nke yist bụ gram 16
Ndewo m ahụla nnabata mana ị nwere ike ịgwa m ihe ọnọdụ okpomọkụ bụ ikuku? Biko YOUDAN YOU…
elizabeth sosa dijo
Zaghachi nye Elizeeth sosa
Gịnị ma ọ bụrụ na chocolate nwere sunflower lectin na Ntụziaka 1
Nnọọ. Ọfọn, ọ dịghị mma maka ndị na-ahụ nfụkasị akwa ... Naanị soy lecithin ka akwadoro
Lecithin ọ bụla kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụhaala na ọ bụghị site na àkwá, otu ụbọchị site na sunflower dị ka nke soy
Zaghachi nye sheyla
na ọ bụ yist nke eze ọ bụghị ya? Ego ole ka ọ bụ soda?
Nesquik nwere ike ịnwe lectin, ma ọ bụ margarine sunflower, ma ọ bụ yist Royal, ọ dị mma? Ego ole ka ọ bụ soda?
Creepie Hiug dijo
Amaghị m nke m ga - eme n'ime atọ ahụ ... Echere m na ha bụ ezigbo Ezi ntụziaka: /
Zaghachi na Creepie Hiug
onye nwere agwa
Achọrọ m ịbụ 1 ma ọ bụrụ na enweghị m yogọt, enwere m ike itinye ya
Taa ka m meere yogọt achicha ma ọ dị mma. Daalụ.
Sebastian carrasco dijo
Ndewo, enwere m ike dochie ntụ ịme achịcha na soda? Nwa m nwoke nwere ihe nfụkasị nri na protein ehi.
Zaghachi Sebastian Carrasco
Ugbo ala mmiri dijo
Ekele, mgbe ị na-ekwu maka ntụ ọka, ọ bụ ntụ nkịtị ma ọ bụ jiri ya ọsọ ọsọ?
Zaghachi na Mariangely Campos
Ekele, mgbe ị na-ekwu maka ntụ ọka, ọ bụ ntụ ọka niile eji eme ya ọ bụla ka ị nwere ike iji ntụ dị njikere?
Ụtụtụ ọma. Ọ ga-amasị m ịme nke nne nne mana m ga-achọ ịma ụdị ntụ ọka, otu m ga-esi dochie shuga maka ihe na-atọ ụtọ na agwakọta agwakọta na thermomix. Daalụ
Ọ nwere ihe adịghị mma na achicha oroma. ọ dị ilu nke ukwuu.
Yist ha na-eji bụ
Ntụ ịme achịcha?
Mara mma mercedes dijo
Daalụ nke ukwuu maka ihe ọmụma gị.
Zaghachi Mercedes Hermoso
Ndewo na nhazi maka achicha lemon ọ na-ekwu ego ole bụ 1?
Ndewonu! N'okwu a, 1 ihe na-ezo aka 1 iko yogọt zuru oke (iko 125g). Echere m na m nyere aka na azịza m.
Zaghachi Ascen Jimenez
Otu esi eme salmon achicha zuru oke
Zucchini carpaccio ya na Modena balsamic mmanya emulsion